JMC-S Mon | Bayda Institute (Myanmar)
(+95 9) 404253660
Union Peace Conference 21 century
JMC – Union
JMC – State
JMC – Local
Confilt and Impact
Analysis on Peace Process
မွန်ပြည်နယ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ
စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် နေ့ ။ ။ ဇွန်လ ၃၀ရက်နေ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်
ကော်မတီဝင်ဦးရေ ။ ။ ၁၄ ဦး
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်
(ဒုဥက္ကဌ – ၂)
KNLA (အတွင်းရေမှူး – ၁)
ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ရဲထွဋ် (အတွင်းရေးမှူး -၂)
JMC-S (မွန်ပြည်နယ်) ကော်မတီ ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ
မော်လမြိုင်မြို့ (၁၆)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး
၁၁ ဦး လစဉ်အစည်းအဝေးသည် အခက်ခဲများကို ဖြေရှင်းရန် နေရာဖြစ်ပါကြောင်း၊လစဉ်အကောင်ထည်ဖော်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို သုံးသပ်ရန် နေရာလည်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
မော်လမြိုင်မြို့ (၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး
၁၀ဦး လစဉ်ပုံမှန် တွေ့ဆုံမှုကြောင့် အခက်အခဲ ပြဿနာများကို ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ပုံမှန် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်းကြောင့် စိစစ်အတည်ပြုရလောက်အောင်အထိ ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမား မပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန် တိုက်တွန်းပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၃ Mar-29-2018 မော်လမြိုင်မြို့ (၁၄) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၂ ဦး  JMC လုပ်ငန်းများကို အတူတကွ လုပ်ဆောင်သည့်အခါ နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အကြား ပိုမိုခင်မင်ရင်းနှီးလာသလို ပြည်သူများကလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုလာနိုင်ကြောင်း၊ ယခု အစည်းအဝေးမတုိုင်မီ ကာလအတွင်း ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ငြိစွန်းသည့် ဖြစ်စဉ်အချို့ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါဖြစ်စဉ်များ နောင်တွင် ထပ်မံမဖြစ်ပွားအောင် JMC က ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ NCA ပါ အချက်အများကို အောက်ခြေအဆင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သိရှိနားလည်မှု အားနည်းနေသေးကြောင်းနှင့် JMC လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဖြင့် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်သွားကြစေလိုကြောင်း ပြောသည်။
၄ Feb-25-2018 မော်လမြိုင်မြို့ (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး
၅ Jan-29-2018 မော်လမြိုင်မြို့ (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်၍ နှစ်ဖက်တပ်မှူး များအား တွေ့ဆုံပေးခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမှုများရရှိလာပြီး ပဋိပက္ခများ လျော့နည်း သွားစေရန် လုပ်ဆောင်လာနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုတွေ့ဆုံများလည်းကို  လစဉ် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ကြားကာလတွင် ကန့်ကွက်အကြောင်းစာများနှင့် ပတ်သက်သော ဖြစ်စဉ်များရှိခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ ချိတ်ဆက်စိစစ် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ JMC-S (မွန်) ကော်မတီဝင်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ တွေ့ဆုံပွဲ၊ နှစ်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမှ တပ်မှူးများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ် ကျင်းပမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်ဖက်လေးစားလိုက်နာရမည့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို အောက်ခြေအဆင့်အထိ သိရှိနားလည်အောင် လုပ်ဆောင်သွားလျှင် JMC ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုထိရောက် အောင်မြင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
၆ Dec-30-2017 မော်လမြိုင်မြို့ (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး
၇ Nov-30-2017 မော်လမြိုင်မြို့ (၁၀) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး
၈ Oct-27-2017 မော်လမြိုင်မြို့ (၉) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး
၉ Sep-21-2017 မော်လမြိုင်မြို့ (၈) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၂ ဦး အစည်းအဝေး ပုံမှန် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် မြေပြင်တွင် ဖြစ်ပွားသည့် ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
၁၀ Aug-24-2017 မော်လမြိုင်မြို့ (၇) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး အမျိုးသမီး အရပ်သား ကိုယ်စားလှယ်အား ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂) အဖြစ် ရွေးချယ်သည်။
၁၁ Apr-25-2017 မော်လမြိုင်မြို့ (၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး
၁၂ Jan-27-2017 မော်လမြိုင်မြို့ (၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး
၁၃ Dec-30-2016 မော်လမြိုင်မြို့ (၄) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး
၁၄ Jun-30-2016 မော်လမြိုင်မြို့ ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့် အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း
JMC – Union အကြောင်း
JMC-Union ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်
JMC-Union ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
JMC – State အကြောင်း
JMC – S လုပ်ငန်းတာဝန်
JMC S လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
JMC – Local အကြောင်း
JMC – L လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
JMC – L လုပ်ငန်းတာဝန်များ
Room 11-E, Sabal Phyu Condo, Lay Daung Kan Road, Thingangyun Tsp,Yangon, Myanmar.
+959404253660
© 2018-2020 BAYDA Institute. All rights reserved. Web Design by NetScriper